सभामुखमाथि हुलहुज्जत गर्न मिल्छ ? « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
सभामुखमाथि हुलहुज्जत गर्न मिल्छ ?
प्रकाशित मिति : २०७८, ४ भाद्र शुक्रबार २१:४४
डा. खिमलाल देवकोटा ।
१४ साँसदलाई कारवाही गर्न मिल्दैन । तत्कालिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६(२) अनुसार संसदमा विश्वाश लिने प्रयोजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रिय कमिटि कुनैमा पनि छलफल र निर्णय भएको छैन । ( सभामूखलाई लेखेको चिठी र संलग्न कागजात अनुसार ) ।
दलीय व्यवस्थामा हरेक निर्णयहरु दलमा/पाटीमा हुनुपर्दछ । ( सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसला अनुसार )
धारा ७६(५) को व्याख्याका सन्र्दभमा अगिल्लो धारा क्रियाशील भएपछि पछिल्लो धारा निष्क्रीय हुने भनेको छ । ७६(२) प्रयोजनका लागि सोधिएको स्पस्टीकरणलाई थाती राखी ७६(३) र ७६(५) लाई क्रियाशील गराईएको छ ।
यतिमात्र हैन संसद विघटन गरिएको छ । स्पस्टीकरण सोधिएका साँसदहरुकै हस्ताक्षरका कारण संसद पुनःस्थापना भएको छ । उहाँहरुकै हस्ताक्षरका कारण सरकारले विश्वाशको मत पाएको छ । यति धेरै घटनाक्रमहरु विकास भईसकेको अवस्थामा अब पछाडि फर्केर धारा ७६(२) मा सहयोग नगरेका आधारमा कारवाही गर भन्न मिल्छ ?
सभामूख संसदको सर्वोच्चता जगेर्नाको पहरेदारमात्र हैन । आफना साँसदहरुको अभिभावक पनि हुन । तथ्य र प्रमाण बिना प्रतिशोध साँध्नका लागि लेखिएको चिठीका आधारमा सभामूखले साँसदहरुलाई कारवाही गर्न मिल्दैन/पाउनुहुन्न । कारवाही नै गर्ने हो भने पनि यसको विधी होला । समयसिमा होला । चिठी लेख्नेवित्तिकै किन कारवाही गरिनस/सूचना टाँसिनस भनेर सभामूखमाथि हुलहुज्जत गर्न मिल्छ ?
वैदिक सृष्टि मीमांसाः इन्द्र
डा. गोविन्दशरण उपाध्याय । इन्द्र देवताका राजा हुन् । कश्यप तथा अदितिका छोरा